မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: December 2007
ဇန်န၀ါရီ 1ရက်နေ့ မနက်အစမှာ Parkroyal Hotel မှာလုပ်တဲ့ New Year Party ရဲ့ Lucky Draw Prize No.6(Yangon-Bangkok-Yangon roundtrip ticket including) ပေါက်သဗျ။ (ကြုံလို့ ပြန်ကြွားတာ အဟက်ဟက်) ဖေဖေါ်ဝါရီလရဲ့ နောက်ဆုံးရက် မွေးနေ့မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ပံ့သကူ သင်္ကန်းလှူပါတယ် (ကြုံတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးနဲ့ အလှူခံပေးဖို့ တောင်းဆိုပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်းရွတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း နိဗ္ဗာနဿပစ္စယောဟောတု လိုက်ရွတ်ရပါတယ်) မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာ မေမေနဲ့တွေ့ရတယ် (မောင်လေးတို့ မိသားစုပါ ရန်ကုန်လာလည်ကြတာ ပျော်စရာပါ) မတ်လ ထဲမှာတော့ မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်က မင်ဘာတွေနဲ့ သွားသွားလာလာ ဆုံစည်းပျော်ရွှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပရယ်သင်္ကြန်မှာတော့ ရေချိုးခန်းထဲချော်လဲလို့ ခါးနာပြီး သင်္ကြန်မကဲလိုက်ရတာ နာသဗျာ :P နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့မှာတော့ တောင်ဥက္ကလာက မြင်သာမြို့ဦးဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းမှာ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လို့ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ငွေကို မြန်မာကျူးပစ်အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်စု အနေနဲ့ သွားလှူဖြစ်ပါတယ်။ အော်စီမှာ အခြေကျနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်း(သူငယ်ချင်းကောင်း) တစ်ယောက်လဲ အလည်ပြန်လာလို့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံတွေ့ခွင့် ရပီး တွံတေးကို အပျော်ခရီး ထွက်ဖြစ်တာလဲ ပျော်စရာပါ။ လကုန်ရက် 29ရက်လောက်မှာလဲ အရင်လေးနှစ်လောက်က ဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းမမ တစ်ယောက်အတွက်ရည်စူးပီးတော့ ပညာရေးပဒေသာပင်အလှူလေးကို အဲဒီကျောင်းမှာပဲ ထပ်သွားလှူဖြစ်ပါသေးတယ်။ မေလမှာတော့ မြန်မာဘလော့လေးစရေးလို့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရစပြုပြီပေါ့။ နောက် Searchers Myanmar အဖွဲ့နဲ့ အတူ ကော့မှူးမြို့နယ် ဆင်ခြံကျေးရွာက အောင်ဇမ္ဗူဆေးခန်းအတွက် ပါဝင်ကူညီမှုလေးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ 24ရက်နေ့မှာတော့ AIDS နဲ့သေသွားတဲ့ သူတွေအတွက် မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ လုပ်တာလေးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဇွန်လမှာတော့ ဘလော့ဂ်စာအုပ် ထုတ်ဝေမှုအတွက်လဲ အလှူငွေ ထည့်ဖြစ်သေးတဲ့ အပြင် offline စုစည်းမှုတွေပါ ရှိလာတယ်။ Searchers Myanmar အဖွဲ့နဲ့အတူ Leadership skill training တစ်ခုမှာလဲ organize လုပ်တာ ကူဖြစ်သေးတယ်။ ဇူလိုင်မှာတော့ မန်နေဂျာဖြစ်ပြီဗျ (ရာထူးတိုးတယ် ကြုံလို့ ထပ်ကြွားတာ ဒါပေသိ လခကတော့မတိုးသေး :( ) သြဂုတ်မှာတော့ ဘလော့ဂ် ဆီမီနာလုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြတာ အသည်းအသန်ပါ။ မိတင်းတွေများစွာ (ဒုတိယပိုင်းတော့ ကျမမပါ) ပြီးတော့ စပွန်ဆာတွေ တောင်းရတာ။ စက်တင်ဘာ 1ရက်မှာတော့ ဘလော့ဂ်ဆီမီနာ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာမှာ သီတင်းကျွတ်တော့ လူကြီးတွေကို မျက်နှာလှလှနဲ့ ကန်တော့ ဖြစ်ပါသေး၏။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ညရဲ့ မီးပုံးပျံလွှတ်ပွဲလေးကလဲ ရင်ခုန်စရာအတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လကုန်ရက်ပိုင်းလောက်မှာတော့ မမျှော်လင့်ပဲ ငွေဆောင်ကမ်းခြေကို အလုပ်နဲ့အတူ ခရီးထွက်ခွင့်ရခဲ့တာလေ ကောင်းသဗျ။ နိုဝင်ဘာမှာတော့ ကထိန် အလှူနှစ်ခု ကြုံပါတယ်။ တစ်ခုက ရုံးက ပဒေသာပင်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက လမ်းထဲက ဓမ္မာရုံက ပဒေသာပင်ပါ။ သင်္ကန်း နှစ်စုံလှူဖြစ်ပါသေးတယ် (နှစ်စဉ်လှူနေကြ အလှူပါ) ဒီဇင်ဘာမှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလိုက်ပီး ၀ါးတီးဗျို (ဘာညာနဲ့ ပင့်ဂိုးလ်လဲ ပါသဗျ)နောက်တစ်ခုက ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံမှာ ဈေးပွဲတော် အလှူအတွက်လဲ အကြော်စုံလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီး တတပ်တအား လှူလိုက်ပါသေးတယ် (ဘလော့ဂါ 11ယောက်ပါတော့ 11မီးငြိမ်းပဲဗျာ) ကဲ ဒီနေ့ညတော့ ရုံးက New Year Staff Party မှာ သွားကဲမယ်။ Lucky Draw မှာ ပါတာတွေက ဟိုတယ်ဆိုလဲ နှစ်ယောက်ခန်းတဲ့ ။ စားသောက်ဆိုင် ညစာ ဆိုလဲ နှစ်ယောက်တွဲတဲ့ ဗျာ။ အဲဒီတော့ သေပြီဆရာပေါ့နော် အဟက်ဟက် 2007 ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိတော့ အဲဒီလိုလေးတွေ မှတ်မှတ်ရရ ကုန်ဆုံးသွားသဗျို။ 2008 အတွက်လဲ ဒီလိုပဲ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော နှစ်မျိုးလေး ဖြစ်ချင်ပါရဲ့။ •.♥¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.• Happy New Year 2008 To You All naw.¸¸.•♥´`♥•.¸♥.¸.•♥´¨`♥•.•
ကျမရဲ့ ဖေဖေက ကျမလိုပဲ ကဗျာတွေရေးတတ်တယ် ပြီးတော့ ကျမဘလော့ကိုလဲဖတ်လေ့ ရှိတယ်။ (ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျမဒိုင်ယာရီတွေ ယူဖတ်တာလေ :P)စိတ်တိုနေတဲ့ ကျမကို ချစ်သောဖေက ပြောတယ် စစ်မှန်သောအမြတ်ဆိုတာတဲ့ လုပ်နေတာက တခြား ဖြစ်နေတာက တခြား အဲဒါသဘာဝတရား။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာက ရာခိုင်နှုံးနည်းပေမဲ့ သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာက ရာခိုင်နှုံးများတယ်ဆိုတာ (ငါ) သိလိုက်ပြီ။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ အဖြေရှာကြည့်တော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတဲ့။ ယုံရဲ့လား… တကယ်ပါနော် တကယ်..တကယ်..စဉ်းစားကြည့်လိုက် (မင်း) သိသွားမှာပါ။ လုပ်နေရမှာက ကိုယ့်အလုပ် သူဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေတာက သူ့အလုပ် သူနဲ့ကိုယ်အားပြိုင်နေမှ အနိုင်အရှုံးဆိုတဲ့ အဖြေ ထွက်လာမှာပေါ့။ သူရှုံးသူခံ ကိုယ်ရှုံးကိုယ်ခံ သရေဆိုတော့လဲ ကျေနပ်ရမှာပဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ညီတဲ့တန်ဖိုး ပြန်ရခဲ့ရင် ကိုယ့်အတွက်တော့ စစ်မှန်တဲ့ အမြတ်ပါပဲလေ.. တဲ့ အဲဒီကဗျာလေး ချစ်သောဖေရေးပေးတယ်။ ကျမတို့ စစ်မှန်တဲ့ အမြတ်ရပါ့မလား…
အခွင့်အရေးတွေ ပျောက်ဆုံး အဲ့ဒီဘ၀ကို ငါမုန်း တောင်းဆိုမရ ရှောင်ပြေးမရ လူလုံးမလှ တို့ဘ၀ ဘယ်တော့များမှ လွတ်မလဲဗျ
ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးတစ်ရွာ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ ကွာဝေးနေတာ မရှိပါတဲ့… ဒီလိုနီးကပ်စေတာ အဖြေရှာစရာမလိုပါ အင်တာနက်ဆိုတဲ့ မြစ်တစ်စင်းကြောင့်သာ.. ရင်ထဲမှာ အကြင်နာကမ္ဘာ နှလုံးသားရပ်ဝန်းတစ်စုံမှာ တွယ်တာနေတာကိုယ်စီအသိပါတဲ့.. အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတွေ့ချင်တာ အကြောင်းပြချက်ဖွေရှာ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ မြစ်တစ်စင်းကြောင့်သာ..
ဆောင်းနှင်းဖွေးဖွေးလေနုအေးသွေးလို့ စောင်ခြုံကွေးရင်းရိုးရိုးလေးတွေးမိ..နင့်ကို..ငါ..ချစ်၏ Gepostet von
လ္ဘက်ရည်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သိသမျှ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေက- ၁- ချိုကျ၂- ချိုပေါ့၃- ချိုပေါ့ကျ၎- ချိုစိမ့်၅- ကျောက်ပန်းတောင်း၆- ပေါ့စိမ့်၇- ကျစိမ့်၈- လဲသေ(ချိုလွန်းလို့)၉- ပုံမှန် အဲလိုပြောတော့ လဲသေဆိုတာကို ဘယ်ဒေသက အခေါ်လဲတဲ့ ။ အဲဒါ မိုးကုတ်ကသူတွေ သောက်တာလေ။ (အအေးကိုကျ ခဲသေ- အေးလွန်းလို့ ) အခေါ်အဝေါ်တွေကွဲပြားများပြားသလို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လာထိုင်တဲ့သူတွေကလဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးပါ။ ကြီး၊ငယ်၊ ရွယ်လတ်မရွေး ကျားမ မရွေးဆိုသလို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာကြတာဟာ မထူးဆန်းတဲ့ အပြင် မြန်မာ ကျူးပစ် ဖိုရမ်ထဲမှာတောင်မှ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ထားသေးသဗျ။ အဲဒီ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေးကို အကြောင်းပြုပြီး မြန်မာကျူးပစ် မင်ဘာ မိမီ အပါအ၀င် တခြား နှစ်ယောက် လက်စွမ်းပြထားတဲ့ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတိုလေးကို ဒီမှာ ပို့စ်အနေနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ (မင်ဘာနာမည်တွေအတိုင်း မပြင်ထားဘူးနော်) ဇတ်လမ်းအစ-အပြင်မှာ မိုးလေးဖွဲဖွဲ ရွာနေတာနဲ့ လက်ဖက်ရည်သောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ ကိုဇာနည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်ထိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုင်ထဲကြည့်လိုက်တော့ စားပွဲထိုးလဲ မတွေ့ ၊ အတင်းပြောတဲ့လူတွေလဲ မတွေ့ (အဲလေ) သတင်းလေး ဘာလေး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ လူတွေလဲ မတွေ့နဲ့ လက်ဖက်ရည်တောင် ဘယ်လိုမှာရမှန်းမသိဘူး ။မဟုတ်မှလွဲရော (မဟုတ်ရင်တော့လွဲပြီပေါ့နော်) သိုင်းလောကသားတွေ လာသောင်းကျန်းထားလို့ထင်ပါရဲ့။ခနနေတော့ မဲမဲ မဲမဲနဲ့ သရဲထက်တောင် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မန်းသရဲဆိုတဲ့ စားပွဲထိုး ရောက်လာပါလေရော။ မန်းသရဲ။ ။ အကိုဘာသောက်မလဲဗျ။စီတီယူ။ ။ ရေနွေးအိုး (၁)အိုးလောက်ကွာ။မန်းသရဲ။ ။ဟမ်.... စီတီယူ။ ။ သြော်..ဒီလိုပါ...မြန်မာပြည်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလဲ ရေနွေးမှာပြီး ပွားကြတာမို့လား အလွမ်းပြေလေးပေါ့...ဟဲဟဲပြီးမှ ထပ်မှာမယ်ကွာ။ မန်းသရဲ။ ။(ဒီကောင် လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးဖို့ ပိုက်ဆံတောင်ပါရဲ့လားမသိဘူး ၊ ပုံစံကတော့ လူရည်သန့်လေးပါ) မန်းသရဲ စိတ်ထဲ တွေးနေပုံ ( အဟိ)စီတီယူ။ ။ ဒါနဲ့ မင်းတို့ဆိုင်ရှင်ကော မတွေ့မိပါလား။ ဘယ်ပျောက်နေလဲ။ မန်းသရဲ။ ။ ပြော မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျ(စိတ်ပျက်တဲ့ လေသံနဲ့)။စီတီယူ။ ။ မပြောချင်လဲ မပြောနဲ့တော့လေ ။မန်းသရဲ။ ။အဲလိုတော့ လုပ်နဲ့လေ...ပြောမှာပေါ့ဗျ။ ဒီလူလေ သူ့မဒီလေးနဲ့ အိုကေတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ကိုပစ်ထားတာကြာပေါ့။ ဆိုင်မှာလည်း သူမရှိတော့ ဆိုင်ကကောင်တွေလည်း နေချင်သလိုနေ ကြတော့ တာပဲ။ စီတီယူ။ ။တခြားဘယ်သူတွေ ရှိသေးလို့လဲ။မန်းသရဲ။ ။ အဖျော်ဆရာ ကိုရင်အုန်းလေ။ ဒီလူလဲ မူးရူးပြီးတော့ အရက်ဆိုင်ပဲ ရောက်နေတာ။ တွေ့တယ်မို့လား ကျူးပစ်ဘားခန်းထဲမှာ။ဆိုင်ရှင်က အစဂရုမှ မစိုက်တာ..ကုန်မှာပါပဲ။ ထိုအချိန်တွင် ဆိုင်ရှင် ဇာနည် အပြင်မှ သူ့ဟာလေး( အများပြောပြောနေတဲ့ မချစ်ခလုပ်တိုက် (မချစ်=မုန်း ခလုပ်တိုက်=လဲ) မုန်းလဲ=မဲလုံး လေး ချစ်နှင်းဆီနှင့် ) ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးလုပ်ပြီး ပြန်ရောက်လာသည်။ ဆိုင်ရှင်။ ။ဟေ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ သရဲ...ငါ့အတင်းချနေတာလား။မန်းသရဲ။ ။ဟာ..မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ်..ဆရာနဲ့ ဆရာ့မဒီလေးအကြောင်း ပြောပြနေတာပါ။ ဟဲဟဲ ဟဲ(သွား ၃၂ ချောင်း အကုန်ဖော်ပြီး ရီပြလိုက်သည်။) ဆိုင်ရှင်။ ။သြော်..ဂလိုလား..အေး အေး (ကျေနပ်နေတဲ့ လေသံကြီးနဲ့) လိုတာရှိရင်ပြောနော် ကိုစီတီယူ ၊ ဆိုင်ကတော့မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဟိုကောင် ကျင်ဆန်းဖုန်း လာမွှေသွားလို့။ စီတီယူ။ ။ သြော်..။(ရေးသူ – စီတီယူ) ဟင် . . . နာမည်တော့ ပျက်ပါပြီ။ကျန်ဆန်းဖုန်း ပါဗျာ။ဆရာသမား လုပ်တာနဲ့ လူတောင် ကျင်တင်တင် ဖြစ်သွားပြီ။ "ကဲကွာ" ကျန်ဆန်းဖုန်း မှ ပြောပြောဆိုဆို ဒေါသတကြီးဖြင့်ဃွှ့ ထိုင်နေသော စားပွဲကို လက်ဝါးနှင့် ရိုက်လိုက်ရာ စားပွဲခုံ အပိုင်းပိုင်း ကျိုးသွားလေ၏။ ဃွှ့ လည်းကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးသွားလေ၏။ ( မှတ်ပြီလား ) "ရွှပ်""အမလေး" ကျန်ဆန်းဖုန်း မှ ဓားကို ဆွဲထုတ်ကာ ဇာနည် ၏ စက်ကတ်ကြေး မီးမီး အား ဓားဖြင့် လှမ်းထောက်လိုက်သည်။ ကျန်ဆန်းဖုန်း ။ ။ ကောင်တာ အံဆွဲထဲက ပိုက်ဆံတွေ ကျွန်တော့်ကို ပေးပါ။မီးမီး ။ ။ ဟုတ် . . . ဟုတ် အကုန်သာယူသွားပါရှင်။ ကျွန်မ ပိုက်ဆံလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာနည့် ပိုက်ဆံတွေပါ။ ဆိုင်ပြုတ်တာပဲ အေးပါတယ်။ အကုန်သာ ယူသွားပါ။ ဒါနဲ့ ၀ူတန်းက အဖြူရောင်ဂိုဏ်းဆို။ ဘာလို့ ပိုက်ဆံလာလုနေတာလဲ။ကျန်ဆန်းဖုန်း ။ ။ သိုင်းလောက၏ စိန်ခေါ် သံ အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခြင်း အခမ်းအနား အတွက် ပိုက်ဆံလိုလို့။ ထို့နောက် ကျန်ဆန်းဖုန်း သည် ဇာနည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ရောင်းရငွေများအား ကျန်ကျောင်းအိတ်ဖြင့် ထည့်ကာ ထွက်သွားလေ၏။(ရေးသူ – ဗီးနပ်စ် ၀၀၀၀၀၆) သိုင်းလောက က ကျန်ဆန်းဖုန်း လုပ်လို့ ဇာနည့် ဆိုင် ပြုတ်သွား လို့ တော့ မဖြစ်ချေဘူး။ကဲဒီတော့ ..... ဇာနည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ရောင်းရငွေများအား ကျန်ကျောင်းအိတ်ဖြင့် ထည့်ကာထွက်လာသော ကျန်ဆန်းဖုန်း လဲ အပေါက်ဝအရောက် ရွှီ....၀ှစ်..၀ှစ် ဓါးပျံ တလက်က ကျည်ဆန်ထက်မြန်သောအရှိန်နှုံးဖြင့် တနေရာမှ ပြေးထွက်လာကာ ကျန်ဆန်းဖုန်း ၏လက်ထဲမှ ကျန်ကျောင်းအိတ်ကို ဖေါက်ထွက်ယူငင်ပြီးဆိုင်နံရံတွင် သွားစိုက်နေလေ၏။ ဟေ့ ဘယ်ကောင်လဲကွ ငါတို့ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကျူးပစ်ကမ္ဘာထဲက ကျူးပစ်မောင်နှမတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆုံစည်းရာ ဒီကျူးပစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေး ပြုတ်အောင် ပိုက်ဆံလိုတိုင်း လုပ်ချင်ရာလုပ်ရအောင် ဘယ်သူ့ ခွင့်ပြုချက် ရထားတယ်များမှတ်နေလား အသက်ပါမသွားချင်ရင် အသာတကြည်နဲ့ လာရာလမ်းကို ခြေလွတ်လက်လွတ်သာပြန်ကြွလေတော့ အသင်သိုင်းလောကသား ကျန်ဆန်းဖုန်းချင်ဖုန်း မဖုန်းချင်နေရေ ကျန်ဆန်းဖုန်း။ ။နီဟောင် ၀ဟောင် နီမဟောင်ရင် ဟောင်ချင်တဲ့ သူဟောင်ဝူတန်းဂိုဏ်းက သိုင်းလောကရဲ့ သူရဲကောင်း ကျန်ဆန်းဖုန်း ဆိုတာမကြားဖူးလို့ ဒီလိုနှောက်ယှက်ဝံ့ တယ် ထင်ပါရဲ့။ ယိစ်....(ကီသွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ မနက်က ကောက်ညှင်းပေါင်းစာထား၍ အီးညှစ်ပေါက်ရာမှ ထွက်လာသော အသံသာဖြစ်ပါသည်) ဒိုင်း ဒိုင်း လာကယ်သော ကယ်တင်ရှင်လူစွမ်းကောင်းမှ ပစ်ဖေါက်လိုက်သော သေနတ်သံဖြစ်သည်။တချက်မှာ ကျန်ဆန်းဖုန်း၏ ဦးခေါင်းထက်မှ ဦးလျှောင်ဆံထုံးကို ထိမှန်လွင့်စင်စေပြီး နောက်တချက်မှာ မိုးပေါ် သို့ ထောင်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယတချက်ပစ်ဖေါက်သံနှင့်အတူ သိုင်းလောကရဲ့ သူရဲကောင်း ကျန်ဆန်းဖုန်းလဲ အခြေအနေမဟန်မှန်းသိသည်နှင့် နှစ်တထောင်ခွေးချေးစား၍ ရရှိထားသော နှစ်တထောင်အတွင်းအားကို အစွမ်းကုန်ညှစ်ထုတ်ကာ တရုတ်ပြည် ၀ူတန်းတောင်ဆီသို့ ကိုယ်ဖော့ ကာ အပြေးပြန်လေသတည်း။ စက်ကတ်ကြေး မီမီ။ ။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဒီက ကယ်တင်ရှင်လူစွမ်းကောင်းကြီးကို။သူသာမကယ်ရင် မီမီတို့ ဆိုင်လဲ အပြုတ်ပဲ။ မမနှင်းဆီ ရဲ့လူ ကိုဇာနည် တော့ ခါလီ ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ မီမီလဲ အလုပ်ပြုတ်တော့ သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ရွှေဟင်္သာလေးဖြစ်ရဦးမယ်။ တကယ်ကြီးကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ လူစွမ်းကောင်းကြီးကို ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ မနစသမအ တင်ချင်လို့ နာမည်လေးတဆိတ်လောက် သိပါရစေရှင်။ လူစွမ်းကောင်း။ ။ဟာ ရပါတယ်၊ ကျုပ်ကမတရားတာဆို လက်ပိုက်ကြည့် နေတတ်တဲ့ သူမဟုတ်လေတော့ ခုလို ကြုံကြိုက်တုန်း မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် အနိုင်ကျင့် ခံရတာကို ၀င်ကူညီရုံသက်သက်ပါ။ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ လဲ မလိုပါဘူး။ ဒါပေသိ နာမည်လေးတော့ ပြောပြခဲ့မယ်။ ကျွန်တော့ နာမည် "ဘခက်" ၊ တချို့ ကလဲ "ဓါး၊ ဓါးဘခက်" လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ခုကတော့ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးနဲ့ အညီ သေနတ်ကိုလဲ လေ့ကျင့်ထားလို့ မန်းလေးတိုင်း အပျော်တမ်းလေသေနတ်ပစ် ပြိုင်ပွဲမှာတောင် ရွှေတံဆိပ်ဆုရလိုက်သေး။ ကြွားတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်က ကြုံလို့ ပြောပြတာနော်.. ကဲ သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ နောက် ခဏခဏ ကြုံသလိုလေးတော့ ဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင် လာထိုင်ပါဦးမယ်။။ ကဲ... ကဲ လာကြနော် တခွက် ၁၀၀ ထဲ။ ကျူးပစ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကြီး အရင်လို ပြန်လည် ဖွင့် လှစ်နေပါပြီ။ စာကြွင်း။ ။ကျူးပစ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးမပိတ်စေချင်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆက်လက်ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဆွေလှိုင်ဦး ဇာတ်ကောင်အား ရောချ ယူသုံးခြင်းကို ခွေးလွှတ်သီးခံကြပါရန်။ ဘ၀အမောတွေကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောရင်း ဖြေသိမ့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေထိုင်ရင်း ပေါရဲတယ်လို့ အပြောခံရလဲ ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ သူတွေကို ငေးမောကြည်နူးရင်း ဒီလို မျိုးတွေ လက်စွမ်းပြဆဲပါ။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အတည်အတံ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်းတစေရဲ့ ပို့စ်မှာ သွားဖတ်လိုက်ပါဦးနော်။ Gepostet von